ကြယ်ပြာ| September 15, 2012 | Hits:7,956
swe htwe September 15, 2012 - 8:34 pm The truth can’t be hidden. Remove the person who didn’t care the people.!!!
Reply ဘုရင် September 16, 2012 - 9:50 am ပြည်သူလူထုနဲ့ သဟဇာတမဖြစ်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ကိုဖြုတ်ချလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းအချက်တွေကတော့ အမှန်အကန်နဲ့ ခိုင်လုံဖို့လိုပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီခေတ် မှာ အများကောင်းစားဖို့ အလုပ်လုပ်နေတာကို မည်သူမဆို ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုးသင့်ပါတယ်။
Reply moses September 16, 2012 - 1:32 pm ပြည်သူကို အကျိုးမပြုတဲ့ လူတွေ———
Reply natttharr September 17, 2012 - 2:33 pm Financingaschool building by selling timber from the forest through connections is the same as Myanmar Economic Holdings exploiting the country and the people to fund the military.